Health amanzi thermal - indlu Marija
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSuncana
USuncana unezimvo eziyi-26 zezinye iindawo.
Le ndlu ikwi-200 m zokwenza amachibi ashushu kunye nombindi we-Topusko. Idolophu yaseTopusko ikumgama oziikhilomitha ezingama-80 ukusuka eZagreb kwaye iikhilomitha ezingama-50 zenza iKarlovac. I-Topusko iyaziwa ngokuba yi-mineral egqwesileyo yokuphilisa amanzi aphilileyo afika kwi-1500 m ubunzulu.
Indawo ebaluleke kakhulu ngokwembali:
- Imiqondiso yokuqala yabantu kwindawo yaseTopusko yafunyanwa malunga ne-2,500 B.C.
- uphuhliso lwangempela lweTopusko luqala emva kokufika kwamaRoma. Bakha iindawo zabo zokuhlala kwi-Ad Fines kwinkulungwane yoku-1
- ngo-1192 i-Topusko ikhankanywe okokuqala njengomthombo wamanzi ashushu
Le ndlu ikumgangatho ophantsi osanda kwakhiwa osisiseko sokutshintsha kunye nokulungiswa kwendlu yamaplanga ye-oki (umgangatho wokuqala). Nangona embindini wayo ungqongwe yindalo, indlu yokuqala engummelwane ikumgama oziimitha ezingama-40. Yindawo efanelekileyo yeholide enempilo.
Indlu eyi-40 m2 yindlu entsha kraca kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo (iTV, ikhitshi: ifriji, imicrowave). Ikumgangatho osezantsi, ilungiselelwe ngokupheleleyo abantu abakhubazekileyo ngokwemigangatho ye-EU. Ibandakanya igumbi lokuhlala elinekhitshi, igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela elibanzi elineshawa.
Kukho iindlela ezininzi zokuhamba kunye nebhayisekile kufutshane. Elona ziko lenzolo iTopusko enemivalo, iivenkile, ikhemesti, iindawo zokutyela, ipaki entle endala kunye nolwazi lwabakhenkethi kuku-250 m kuphela.
Kukho isikhululo sebhasi kwi-250 m kude. Ubuncinci bokuhlala bubusuku obu-3. Ukuba ixabiso elincinci li-30% ephezulu
Umbuki zindwendwe ngu- Suncana
I am an friendly and easy going person. I love to travel and stay in nice and clean places. Therefore I offer my guests same and hope to make their holidays pleasant and memorable.